Global Voices teny Malagasy » Maraoka: niseho masoandro ny fampiasana zaza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Septambra 2009 3:24 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Maraoka, Fahasalamàna, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Tanora, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona
Misy zazavavy tsaboina noho ny ratra sy daroka nahazo azy ao amin'ny hopitaly. Tsy mahalala endri-piainana hafa ankoatra izay iainany ankehitriny i Zineb Chtit rehefa nalefa hiasa ho mpanampy an-trano tamin'ny faha-10 taonany, miasa amina mpanankarena sady midaroka no tsy manome hanina. Hoy ny nosoratan'i A Moroccan About the World Around Him (Maraokana iray miresaka momba ny tontolo manodidina azy) momba ny voina mahazo azy ao amin'ny lahatsorany iray :
Indrisy fa tsy tranga manokana ny mahazo an'i Zineb. Mahatratra 177 000 ny isan'ny zaza latsaky ny 15 taona miasa any Maraoka, ka ny 66 000 dia mpanampy an-trano. Eny fa na dia efa nanasonia ny Dinan'ny Firenena Mikambana momba ny Zon'ny kilonga aza i Maraoka, mametra ho 12 taona raha kely indrindra vao mahazo alefa hiasa ny olona , fetra farany ambany ao an-toerana. Maro ny tatitra momba ny fampijaliana mpanampy an-trano, tahaka ity iray  izay nosoratan'i Tingis tonian'i Anouar Majid ity. Nefa dia mbola mivarotra ny zanany vavy amin'izay mahasahy ambony indrindra ihany ny fianakaviana maro fa entin'ny fahantrana, ampiasaina ho mpanampy an-trano izay indraindray miasa tontolo andro sy tontolo alina. Mitantara ny mpanjò  ny ankamaroan'ny mpanampy an-trano ny mpamaham-bolongana Sarah Alaoui:
Ao amin'ny fitateram-baovaon'ny  [FR] La Vie éco dia samy voampanga ho nanao heloka bevava avokoa na rangahy na ramatoa mpampiasa an'i Zineb, fa araka ny tolo-kevitry ny mpamaham-bolongana Reda Chraibi, dia tokony hisy haingana dia haingana ny fiovana. Namelabelatra  [FR] soso-kevitra maro hisorohana ny fandefasana ny ankizivavy hiasa mbola kely ny mpamaham-bolongana. Santionan'ny tolo-keviny:
Donner à l’Association « Touche pas à mon enfan t » (touche pas à mes enfants) ou à une institution publique le droit de recenser et de contrôler le travail des enfants servantes, le droit d’entrer dans les maisons pour discuter avec elles et vérifier si elles sont traitées dignement. Encourager leur éducation et leur alphabétisation. Ouvrir et faire connaitre un centre d’accueil pour les enfants servantes qui veulent fuir d’urgence le foyer dans lequel elles travaillent, afin que plus aucune Zineb Chtet n’èrre dans la rue dans le sang en demandant l’aide d’inconnus…
Manome fanampiana ara-tsosialy ny fianakaviana tena mahantra mba tsy hahatery azy ireny handefa ny zanany hiasa fa tsy hianatra. Tokony ho maimaim-poana na ny fampianarana na ny kojakojam-pianarana ho an'ireny sarangam-piaraha-monina ireny. Eo amin'izay indrindra dia tokony hatao manerana ny fanjakana ny fanapahan-kevitra mety hizarana kitapo efa misy kojakoja ao anatiny  [FR]. Manome alalana ny fikambanana “Touche pas à mon enfant ” (Aokanao ny zanako) na sampan-draharaham-panjakana hafa hanisa sy hanara-maso ireo zaza miasa tsy fidiny, manan-jò hiditra any an-trano hiresaka amin'ireny kilonga ireny hanamarinana raha voakarakara ny mahaolombelona azy. Handrisihana ny fitaizana sy fampianarana azy ireny hahay mamaky teny sy manoratra. Manokatra sy mampahafantatra ny fisian'ny toerana fandraisana ireo zaza te-handositra ny trano iasany, mba tsy hisy intsony Zineb Chtets feno ratra mirenireny eny an'arabe mitady fanampian'olon-tsy fantatra….
Nofehezin'i A Moroccan About the World Around Him (Maraokana iray miresaka momba ny tontolo manodidina azy) toy izao moa ny lahatsorany :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/09/08/3371/
 lahatsorany iray: http://cabalamuse.wordpress.com/2009/09/01/zainab/
 mametra ho 12 taona raha kely indrindra vao mahazo alefa hiasa ny olona: http://www.dol.gov/ilab/media/reports/iclp/sweat/morocco.htm
 ity iray: http://www.wafin.com/articles.phtml?arttype=cdg&did=12
 amin'ny fitateram-baovaon'ny: http://www.lavieeco.com/actualites/2340-l-epouse-impliquee-dans-l-agression-de-zineb-chtit-poursuivie-en-etat-d-arrestation.html
 Touche pas à mon enfan: http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=6385